नाग्लिवाङमा तीज मेला सुरु,समृद्ध जलजला वनाउने गाउँपालिका अध्यक्ष मल्लको संकल्प ! – ebaglung.com
२०७५ भाद्र २५, सोमबार २१:०४	Top News, थप समाचार
निर्मल पौडेल पर्वत २०७५ भदौ २५ । पर्वतको जलजला गाउँपालिका ८ नाग्लिवाङमा एतिहासिक रुपमा सञ्चालन हुने तीजमेला आजवाट सुरु भएको छ । जलजला गाउँपालिका वार्ड नं.८को आयोजनामा २७ गतेसम्म सञ्चालन हुने मेलाको विधिवत रुपमा उद्घाटन उद्घाटन गर्दै जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष याम वहादुर मल्ल रामकृष्णले रीतिरिवाज कला संस्कृति नेपालीहरुका मौलिक सम्पति भएको भन्दै जोगाइ राख्नु पर्नेमा जोड दिए ।
रुको महान पर्वं हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा सम्पुर्णलाई शुभकामना प्रदान गर्दै मल्लले नाग्लिवाङमा हरेक साल आयोजना हुने एतिहासिक मेलाको छुट्ै महत्व रहेको वताए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी समेत रहेका मल्लले समग्र जलजलाको समृद्धी र विकासको लागि गाउँपालिकाको तर्फवाट कुनै कसर वाँकि नराख्ने वताए । एक फरक प्रसङ्गमा मल्लले स्थानिय सरकारले प्राप्त गरेको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा प्रशासनले दमन गर्न खोजेको आरोप लगाए । जनताले आफ्नो मौलिक हकलाई स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्नेमा मल्लको जोड थियो ।
कार्यक्रममा जलजला गाउँपालिका वार्ड नं १,२,३ र ९ का अध्यक्षहरुले आफ्नो भनाई राखेका थिए । त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका जिल्ला उपसभापति दुर्गावहादुर खत्री, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता महेन्द्र रेग्मी लगाएतले वोलेका थिए ।
कार्यक्रममा विविध खेलकुद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत सञ्चालन हुने आयोजकले वताएको छ ।
आजको उद्घाटन कार्यक्रममा चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक कृष्ण अखेली र गायिका दिपिका पौडेललको सांगीतिक प्रस्तुती रहेको थियो । एतिहासिक मेलामा वनौ ,पाङ, धाइरिङ, मल्लाज सालिजा र वागलुङका केहि स्थानहरुवाट दर्शकहरुको उपस्थिति रहने वताईएको छ ।
जलजला गाउँपालिका वार्ड नं. ८ नाग्लिावाङका अध्यक्ष हरि विकास जि.सी.को अध्यक्षतामा सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन रमेश रेग्मीले गरेका थिए । आजको उद्घाटन कार्यक्रममा व्यापक जन उपस्थिति रहेको थियो । तीजको दिन सम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा हरेक दिन राष्ट्रिय स्तरका कलाकार हाँस्यकलाकारहरुको विषेश प्रस्तुती रहने छ ।
उपचार नपाउदा निसीखोला ४ की ३५ बर्षिया गर्भवती महिलाको मृत्यु !